जनताको करबाट नगरपालिकाको ‘दारु पार्टी’, जनताले यस्ता जनप्रतिनिधिबाट कस्तो आशा गर्ने ?
Homeसमाचारजनताको करबाट नगरपालिकाको ‘दारु पार्टी’, जनताले यस्ता जनप्रतिनिधिबाट कस्तो आशा गर्ने ?
July 11, 2019 Spnews समाचार Comments Off on जनताको करबाट नगरपालिकाको ‘दारु पार्टी’, जनताले यस्ता जनप्रतिनिधिबाट कस्तो आशा गर्ने ?
पछिल्लो समय व्यास नगरपालिकाको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। उक्त भिडियोमा ३१ औं नगरसभाको निर्णय सार्वजनिक गर्न व्यास नगरपालिकाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन सकिएलगत्तै नगर प्रमुख सहित नगरसभा सदस्य म*दिरा सेवन गर्दै नाचेको प्रष्ट देखिन्छ।
ब्यानर नै प्रष्ट रुपमा देखिने गरी आएको भिडियोमा नगर प्रमुख केही सदस्यसँग नाचगानमा मस्त देखिन्छन्।नगरसभा सकिएलगत्तै नगरपालिकाको सभाकक्षमा नगर प्रमुख, केही वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा नगरसभा सदस्यले वल्ड दरबार ह्वि*स्की पिउँदै नाचगान गरेका थिए।
दृश्यमा कर्मचारीले वल्ड दरबार ह्वि*स्की सर्भ गरेको प्रष्टै देखिन्छ। यसैगरी उक्त भिडियोमा सभाको प्रवेशद्वारकै छेउमा राखिएका ह्वि*स्कीका भरी बोतलहरु प्रष्ट देखिएका छन्। स्थानीय एक दैनिकले यस विषयमा समाचार सार्वजनिक गरेपछि यसले जिल्लामा तरंग ल्याएको छ। कर्मचारी संयोजनमा भएको बताइएको कार्यक्रमबारे सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भएपनि नगरपालिकाले भने यसबारे कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
जनताको करबाट नगरपालिकाको ‘दारु पार्टी’
जनताले यस्ता जनप्रतिनिधिबाट कस्तो आशा गर्ने ?
ओली सरकारबिरुद्ध नेविसंघको मसाल जुलुस, दुई दर्जन बढी पक्राउ